Waa maxay mobilada aan la hubin iyo sida loo ogaado in taadu leedahay | Androidsis
Waa maxay mobile-ka Android-ka ee aan shahaado haysan iyo sida loo ogaado haddii taadu tahay
Maalmahan iyada oo dhammaan buuqa ay sameeyeen LG iyo Huawei (waxbadan ka baro iibka LG iyo laga bilaabo Huawei), dad badan ayaa la yaaban maxaa loola jeedaa mobilka in la cadeeyo iyo maxaa dhacaya hadaanu tiisu ahayn. Taasi waa sababta aan ugu baxno xallinta shakiga laga yaabo inaad qabtid.
Iyo haa, xaqiiqdii markaan aqrinayno inaan kahadalno Huawei, iyo dhammaan dhibaatooyinka ka dhacay maamulka Trump iyadoo ay jiraan xayiraadahaas isticmaalka Google Play iyo in ka badan, waxaad ku dhowdahay wadada saxda ah si aad u ogaato waxa looga baahan yahay shahaadada aaladda Android.
1 Waa maxay macnaheedu haddii qalab Android uusan shahaado haysan?
2 Maxaa dhacaya haddii aan isticmaalno aaladda Android ee aan shahaado haysan
3 Sida loo hubiyo in taleefanku sharci yahay
Waa maxay macnaheedu haddii qalab Android uusan shahaado haysan?
Waxaan sidoo kale ognahay taas barnaamijyada Duo iyo Google Messages-ka weyn ee G laga bilaabo bisha Maarso Waxay joojin doonaan ka shaqeynta mobilada gacanta ee aan la aqoonsanin ee Android, marka waxaa jira dagaal dhan bilaha soo socda taasna waa mid soo saaraysa oo aan aragno mid ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan ee goobta Android ka tag dhamaadka-sare sida ku dhacda Huawei (u tag xiriiriyaha ku xusan sadarka koowaad si aad u ogaato dhammaan faahfaahinta hawlgalkan).
Inta badan intooda badan xitaa dhib kuma qabno markaan la macaamileyno inta ka hartay magacyada aan aheyn Huawei, iyo xitaa hadda waxay noqon kartaa Xiaomi sidii aan ogayn, laakiin ma aha wax xun haba yaraatee in aan ogaan karno waxa uu yahay mobiil la aqoonsan yahay iyo sida aan u hubin karno in kuweena ay yihiin.
Aynu nidhaahno aaladaha Android ee aan la aqoonsan ayaa ah kuwa aan ka gudbin imtixaanka iswaafajinta ee Google ee Android, si loo hubiyo tayada ugu yar iyo heerarka badbaadada. Qalabka cusub ee Android si kumeelgaar ah looma hubin markii la sii daayo, laakiin markii dambe hawsha shahaadaynta waa la dhammeeyey
Laakiin xaaladaha kale, sidee uga imaan karaan shirkadda Huawei, aalad aan la hubin waxay ka dhigan tahay in soosaaruhu uusan u soo gudbin shahaado ama uusan si fudud u dhaafin heerarka tayada iyo amniga.
Maxaa dhacaya haddii aan isticmaalno aaladda Android ee aan shahaado haysan
Laga soo bilaabo bogga taageerada Google khataro dhowr ah ayaa la muujiyaa haddii mid ka mid ah aaladahaas aan shahaado haysan la isticmaalo:
Qalabka aan shahaado ka haysan Play Protect ma nabad geli lahaayeen
Qalabka aan shahaado ka haysan Play Protect ma heli doonaan casriyeynta nidaamka Android iyo cusbooneysiinta barnaamijka
Barnaamijyada Google ee aaladaha aan shahaado ka haysan Play Protect ma liisan oo ma noqon doonaan barnaamijyada dhabta ah ee Google
ka barnaamijyada iyo astaamaha aaladaha aan shahaadada haysan Play Protect si sax ah uma shaqeyn laheyn
Xogta aaladaha noocaas ah ee aan ka shahaadeynin Play Protect looma kaydin doono si aamin ah
Waa in la sheegaa taas ma aha dhammaan qalabka Android ee aan la hubin inay khatar yihiin. Tusaale ahaan, haddii aan ku rujinno mudnaanta aaladda, waxay kala noqon doontaa shahaadada qalabka. Si aan markale u helno waxaan si fudud ugu dhaafi lahayn mobilada gobolka warshada.
Sida loo hubiyo in taleefanku sharci yahay
Google mar dambe ma taageerto noocyada qaar sida Huawei, sidaa awgeed annagoo maskaxda ku hayna, waxaannu sameyn doonnaa tallaabooyinkan si aan u xaqiijino haddii aan haysano shahaadada
Fur barnaamijka Google Play
Dhagsii badhanka saddexda dhibic ee bidixda kore
Waxaan aadeynaa hagaajinta
Haddaba qeybta ku saabsan iyo hoosta "Shahaadada Qalabka"Waa inay ku qoran tahay 'shahaado' ama 'aan la caddeyn'.
Haddii aad haysato shahaado aan dhibaato lahayn oo aad ku sii wadato maalinba maalinta ka dambeysa dhijitaalka mobilkaaga adoo og inaad heysato qalabkaaga Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Waa maxay mobile-ka Android-ka ee aan shahaado haysan iyo sida loo ogaado haddii taadu tahay
Ku dhis markabka dagaalka ugu awooda badan dhinaca-muuqaalka RTS Battlecruisers: Naval Warfare
Ganacsiga Telegram ama sida otomaatiga loogu sheekeysto sheekada shirkaddaada